आफ्नै देशको विमानस्थलमा टोपी फुकाल्नुपर्दा दुखेको स्वाभिमान -योहोखबर
आफ्नै देशको विमानस्थलमा टोपी फुकाल्नुपर्दा दुखेको स्वाभिमान
काठमाडौ – पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल विदेश भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो । विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा उहाँलाई टोपी फुकाल्न भनेपछि उहाँको कानसिरी तातिएर आयो । सुरुमा त उहाँले मान्नुभएन । तर दोस्रो व्यक्तिले समेत टोपी फुकाल्न भनेपछि नफुकाली धरै पाउनुभएन ।
यो घटनाले आफ्नो स्वाभिमानमा चोट पुगेको डा. ढकालले बताउनुभएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा निरीक्षणको क्रममा शीरको टोपी फुकाल्नुपरेपछि उहाँले आफ्नो गौरव र आत्मसम्मानमा ठूलो प्रहार भएको अनुभूति भएको बताउनुभएको हो । ।
यसअघि थुप्रै देशविदेशको भ्रमण गरिसक्नुभएका ढकालले अहिलेसम्म कहीँ कतै पनि टोपी खोल्नु परेको थिएन । आफ्नै देशको विमानस्थलमा टोपी फुकाल्नुपर्दाको अनुभवबारे फेसबुकमा लेख्दै उहाँले भन्नुभएको छ ‘एकाध पटकका बेलामा जवाफ दिएको छु ‘म नेपालबाट र यो मेरो राष्ट्रिय पहिचान हो । म गौरवका साथ टोपी ढल्काएर हिँड्छु ।’
सुरक्षा जाँचका क्रममा मन अमिलो भएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ ‘सुरक्षाका कारणले सर्वाङ्गको निरीक्षण स्वाभाविकै होला । तर शीरको टोपीका विषयमा म सन्तुष्ट हुन सकिन । प्रविधिको विकासले टोपीको परीक्षण गर्नलाई फुकाल्नैपर्ने बाध्यता त पक्कै पनि दिएको छैन । सम्बन्धित निकायमा आफ्नो दुःख त बिसाएँ । तर आँखा रसाइरहे । केही धार्मिक सम्प्रदायका केही प्रचलनको सम्मान गरेजस्तै गरी राष्ट्रको गौरव र पहिचानको पनि सम्मान गर्न पाए .....’
५५४ दिन अघि २०७५ मंसिर १० ०७:३० मा प्रकाशित